२०७७ जेठ १६ शुक्रबार ०९:३०:००
बजेटले ठूलो क्यान्सर रोगलाई झारफुक मात्रै गर्‍याे ः डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
विशिष्ट प्रकृतिको समस्या समाधानका लागि विशिष्ट प्रकृतिबाटै बजेट आउन सकेन । ठूलो क्यान्सरको रोगलाई झारफुक गरेजसरी बजेट आयो भन्ने मलाई लागेको छ । एकीकृत ढंगले बजेट आएन । त्यसैले समग्रमा बजेटले समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्दैन । एउटा निरन्तरताका रूपमा आएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन ।
उदाहरणका लागि रेलका लागि किन छुट्याउनुपथ्र्यो, यो वर्ष नगरे हुँदैन ? त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेरि पनि पानीजहाजको कुरा गरिएको छ । राहत र सामाजिक सुरक्षाको बजेट पनि कनिका छरेजसरी आएको छ । यसरी कनिका छर्ने तरिकाले अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन ।
चाँगुनारायणको बजेट एक अर्ब ४८ करोड : पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा
बेथितिको नमुना राष्ट्रिय समावेशी आयोग : पदाधिकारीविहीन आयोगले एक वर्षको ७० प्रतिशत बजेट गाडी खरिदमै सक्यो
प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे बजेट पारित